Mmanụ ndị dị mkpa iji kwụsị ịta ụtaba | Zụọ ahịa na ọnụahịa kacha mma
Mmanụ ndị dị mkpa iji kwụsị ịta ụtaba Mee ka ahụike gị dịkwuo mma. Kpalie uche gị ma nweta uru nke ndị na-agbasa aromatherapy. Na ọtụtụ ọrụ na oge ịgba ọsọ. Ngwunye anyị ultrasonic na-abịa n'ụdị dịgasị iche iche nke dị mma maka ihe ndozi ọ bụla. Chọọ mkpokọta anyị iji chọta onye mgbasa ozi kachasị mma maka gị.
Mmanụ ndị dị mkpa iji kwụsị ịta ụtaba